Jaceylku qoomamo ayuu leyahay maxaa yeelay…….>> | Hoyga Arimaha Bulshada
Jaceylku qoomamo ayuu leyahay maxaa yeelay…….>>
Mobile-da aad ayay u dhib badan yihiin waxa ay u baahan yihiin in joogto maalintii loo Charge-gareeyo, mararka qaar codadka ay ku soo dhacayaan waa dhib badan yihiin , balse aniga mobile-keyga aad ayan u jeclahay waayo waxa uu isku xiraa aniga iyo adiga .
Wax baan ka dareemayaa qalbigeyga , waa sida xogaa iftiin oo kale , mar waliba oo aan ku arko Iftiinkaas aad ayuu usii ifaa, Iftiinkaas adiga ayuu gaar kuu yahay maxaa yeelay waan ku jeclahay , qalbiga ayaad ii nuurisaa .
Xariirka jaceyl ee naga dhaxeeya waa sida gacanta iyo illinta ka timaada isha oo kale , marka gacanta ay dareemeyso xanuun isha waa u ooysaa , marka isha ay ilmeyneysana gacanta waa ay tir tirtaa , ilove you qaali.
Kama qoomameynayo jaceylkii aan ku qaaday , maxaa yeelay maalin uun ayaad ogaan doontaa in aad lumisay dheeyman xilli aad ku mashquulsaneed aruurinta dhagaxaan aan qiimo laheyn .
Gacanteyda waligeed ma dareemeyso xanuun tan iyo inta ay qoreyso fariin kugu socota adiga , balse qalbigeyga xanuun ayuu dareemaa markaan ka waayo jawaab ka socota
Magacaada waan ka tir tiray teleefankeyga , sidoo kale faceook waan ka tir tiray , MSN-KANA sidoo kale balse marka aan is iraahdo qalbiga ka tir tir maya maya maya ayuu leyahay , taasi micnaheedu waxa ay tahay wali kaama samrin.
Iska cafi indhaheyga maadaama ay si weyn kaga heleen quruxdaada , waxaad xaday qalbigeyga markii ay durba ku eegeen , waxaad iigu yertaa qof waalan , qof waalan , mar waliba uu wadnaheyga garaac sameeyo waxa uu i dareensiiyaa magacaada .
This entry was posted on May 15, 2012 by jooqle in Barnaamijyo, Sheeko.